Scaffolding na -ezo aka na nkwado dị iche iche arụnyere na ebe a na -ewu maka ndị ọrụ ka ha rụọ ọrụ ma dozie ụgbọ njem kwụ ọtọ na kwụ ọtọ. Karịsịa maka ndị na -ewu ụlọ ka ha rụọ ọrụ elu na ala ma ọ bụ chekwaa ụgbụ nchekwa dị n'elu ma wụnye ihe ndị dị na elu. E nwere ọtụtụ ụdị nke scaffolding. Karịsịa gụnyere: sistemụ arụ ọrụ na -arụ ọrụ, sistemụ nchekwa nchekwa nchekwa yana iburu ibu na sistemụ nkwado ihe.
Dị ka usoro nkwado nke ihe mkpuchi ahụ si dị, a na-enwekwa ihe nrụrụ ala, nke kpọkwara ụlọ elu ihe mkpuchi, na-agbachitere ihe mgbochi na nkwụsị nkwụsị. A na -arụkarị mkpokọta ihe eji arị elu (nke a na -akpọ '' scaffolding climbing ') dị ka sistemụ nọọrọ onwe ya na ụlọ ọrụ na -ewu ụlọ.
Sistemụ scaffolding bụ otu n'ime njikọ na sistemụ kachasị mkpa maka ịrụ ọrụ nchekwa na injinịa ihe owuwu. Anyị na -akpọ ya sistemụ nchedo echekwara. Sampmax Construction na -elekọta nchekwa nke ọrụ ọ bụla nke ndị ahịa anyị na -arụ. Sistemụ scaffolding niile anyị na -enye na -ezute ụkpụrụ mmepụta kwekọrọ.
Iji Sampmax Construction scaffolding, anyị na -echetara ndị ahịa ka ha attentionaa ntị na nsogbu ndị a:
Ndozi nke ntọala ahụ ga -ebute nrụrụ mpaghara nke scaffold. Iji gbochie ndakpọ ma ọ bụ toppling nke nrụrụ mpaghara kpatara, a na-akwụnye stilts ma ọ bụ nkwado isi na mpaghara transverse nke etiti nwere okpukpu abụọ, a ga-edokwa otu ahịrị kwụ n'ahịrị n'ahịrị ruo mgbe a haziri mpaghara nrụrụ na mpụga. Ụkwụ horoscope ma ọ bụ scissor ga -abụrịrị ntọala siri ike na ntụkwasị obi.
Nwepụ ihu na nkwarụ nke ihe nchara nchara cantilever nke gbanyere mkpọrọgwụ karịrị uru a kapịrị ọnụ, a ga -agbatịkwa ebe arịlịka dị n'azụ azụ osisi cantilever. Ekwesịrị iji ihe nkwado nchara na braket ndị nwere ụdị U mee elu elu osisi nchara iji guzogide elu ụlọ. Enwere oghere dị n'etiti mgbanaka igwe agbakwunyere na ogwe nchara, nke a ga -ejiriri ịnyịnya ịnyịnya wee chekwa ya. A na -enyocha ụdọ waya nchara na nsọtụ mpụga nke ogwe nchara kwụchiri otu otu na -agbadokwa ya niile iji hụ na ike siri ike.
Ọ bụrụ na sistemu njikọta ihe na -ebutu ma na -adọkpụtabeghị na nke mebiri emebi, a ga -eweghachi ya ozugbo dabere na usoro mbupu ebuputara na atụmatụ mbụ, a ga -edozi akụkụ na ndị otu ahụ nwere nkwarụ. Dozie nkwarụ mpụga nke ihe mkpuchi ahụ ka oge na -aga, mee njikọ siri ike, ma mee ka eriri eriri sie ike na ebe ọ bụla na -ebudata iji mee ka ike dị n'otu, wee hapụ ụdọ a tụgharịrị.
Mgbe a na -ewu ya, a ga -agbasorịrị usoro nrụpụta ahụ nke ọma, na ekwesịrị ịwụnye ogidi ndị na -ejikọ ọnụ ka a na -arụpụta oghere dị na mpụga, ka ọ wee nwee ike jikọta ya na kọlụm etiti.
Mkpanaka ndị ahụ kwesịrị ịdị kwụ ọtọ, na mkpanaka ndị ahụ kwesịrị ịdị na -atụgharị anya na ala n'okpuru ala nke mbụ. Ntughari kwụ ọtọ nke ogwe osisi kwụ ọtọ agaghị akarị karịa 1/200 nke ịdị elu ya, na elu osisi kwụ ọtọ kwesịrị ịdị elu 1.5m karịa elu ụlọ ahụ. N'otu oge ahụ, nkwonkwo mkpanaka kwụ ọtọ ga -enwerịrị ihe nkedo butt ma e wezụga nkwonkwo ụkwụ dị n'elu.
A ga -eji mkpanaka na -ehicha ihe na vetikal kwadoo ala nke ebe a na -efe efe. Ekwesịrị idobe mkpanaka mkpocha kwụ ọtọ na mkpanaka kwụ ọtọ ọ bụghị ihe karịrị 200mm site na elu nke nchachi nwere ihe nkwụnye aka nri, a ga-edozikwa mkpanaka kwụ ọtọ ozugbo n'okpuru mkpanaka mkpocha kwụ ọtọ site na ndị na-ejikọ aka nri. N'elu osisi.
Enwere ụgbụ dị larịị n'ime shelf na -arụ ọrụ, a na -ahazi ihe mkpuchi ụkwụ osisi 180mm dị elu na 50mm na njedebe na n'èzí shelf. A ga -edobe ihe mkpuchi nke oyi akwa na -arụ ọrụ nke ọma.
Mgbe ị na -edobe bọọdụ ntụhie, a na -enwe mkpanaka kwụ ọtọ abụọ na nkwonkwo, na nkwonkwo nke mbadamba ihe mkpuchi nke edobere site na ibe ya ga -adịrịrị na mkpanaka kwụ ọtọ. Agaghị anabata bọọdụ nyocha, ogologo bọọdụ ihe nrụrụ agaghị agafe 150mm.
Ekwesịrị idobe nnukwu ogwe osisi n'okpuru obere obe. N'ime n'ime mkpanaka kwụ ọtọ, jiri ihe nkedo aka nri wee kedo mkpanaka kwụ ọtọ. Ogologo nnukwu ogwe osisi ekwesịghị ịbụ ihe na -erughị ogologo 3 ma ọ bụghị ihe na -erughị 6m.
A na -eji ya dị ka okpokoro na -arụ ọrụ n'oge a na -ewu ihe owuwu na ihe ịchọ mma. Ọ bụ okirikiri nwere ahịrị nwere okpukpu abụọ nwere oghere kwụ ọtọ nke 1.5m, anya ahịrị 1.0m, na nzọ ụkwụ nke 1.5m.
N'ebe a na -ewu ụlọ, a ga -ejikọ akwa ọ bụla ọzọ nke etiti dị na ya na oge iji hụ na nchekwa n'oge usoro nrụpụta. A ghaghị ịhazigharị oghere kwụ ọtọ na ahịrị nke mkpanaka ahụ na nrụpụta ya, a ga -agbatịkwa ihe nkedo n'ụzọ dabara adaba.
Isi ihe dị mkpa na -ewu ụlọ nrụpụta ihe
Ekwesịrị imebi mmebi nke usoro ihe nrụpụta ihe na usoro nkwado akwụkwọ ka ọ bụrụ n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ teknụzụ dị mkpa yana atụmatụ pụrụ iche. Mgbe a na -akwatu ya, ngalaba na -ahụ maka nrụzi na nleba anya kwesịrị ịhazi ndị ọrụ pụrụ iche ka ha na -elekọta.
A ga -agbarịsịrị ihe mkpuchi ihe site n'elu ruo na ala site na oyi akwa. A machibidoro ịrụ ọrụ ime elu na ala otu oge, na akụkụ akụkụ njikọ ya kwesịrị ka ewepu ya site na oyi akwa yana ihe nrụpụta. Amachibidoro kpam kpam ịtọsa oyi akwa niile ma ọ bụ ọtụtụ akwa nke njikọ njikọta tupu ịtọsa ihe mkpuchi ahụ.
Mgbe ọdịiche dị elu nke mbibi ngalaba nwere karịrị nzọụkwụ abụọ, ekwesịrị ịgbakwunye iberibe mgbidi maka nkwado.
Mgbe ị na -ewepụ ihe mkpuchi ahụ, buru ụzọ wepụ eriri ọkụ dị nso. Ọ bụrụ na enwere eriri ọkụ e liri n'ala, mee ihe nchebe. A machibidoro iwu idobe ihe nkedo na ọkpọkọ nchara n'akụkụ ụdọ ike.
A machibidoro ọkpọkọ nchara, ngwa na ngwa ndị ọzọ agbasasị ka a ghara ịtụda ha n'ala site n'ịdị elu.
Mwepụ nke ogwe kwụ ọtọ (ogologo 6m) ga -abụrịrị mmadụ abụọ ga -eme ya. A machibidoro osisi kwụ ọtọ dị n'ime 30cm n'okpuru ogwe osisi kwụ ọtọ ka otu onye wepu ya, ọ ga -achọkwa imecha mwepụ ahụ tupu ewepu nrịgo nke àkwà mmiri dị n'elu. Ịrụ ọrụ na-ezighi ezi nwere ike bute ọdịda dị elu (gụnyere ndị mmadụ na ihe).
A ga -ebu ụzọ buru ụzọ wepụta nnukwu obe, ihe nkwado, na ihe nkwado diagonal, burukwa ụzọ buru ụzọ wepu ihe nkedo dị n'etiti, wee kwadoo njigide ngwụcha ya mgbe o jisịrị etiti; n'otu oge ahụ, a pụrụ iwepụ ihe nkedo scissor na ihe nkedo diagonal naanị na mwepu mbibi, ọ bụghị otu mgbe, wepu ihe nkedo nkwado ihe mkpuchi ga -adị mkpa n'oge ahụ, mmadụ abụọ ma ọ bụ karịa ga -ejikọ aka wepu ha.
Agaghị akwatu akụkụ mgbidi jikọtara ọnụ tupu oge eruo. Enwere ike wepu ha naanị mgbe ewepụrụ ha site na oyi akwa n'akụkụ akụkụ mgbidi na -ejikọ. Tupu ewepu akụkụ mgbidi ikpeazụ jikọtara ya, ekwesịrị ịtọ nkwado na osisi kwụ ọtọ iji hụ na a na -ewepụ mkpanaka ndị kwụ ọtọ. nkwụsi ike.